Wararka - Waa Maxay Glove Valve Goormaase La Isticmaalaa?
Waa Maxay Glove Valve Goormaase La Isticmaalaa?
Qalabka globe waxaa lagu socodsiiyaa lugaha gacmaha waxayna sidoo kale habeeyaan wareegga biyaha. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale abuuraan cadaadis lumis weyn.
Doorashada waalka saxda ah waa lagama maarmaan, maaddaama noocyada kala duwan ay leeyihiin shaqooyin kala duwan iyo sidoo kale adeegsiyo. In yar oo iyaga ka mid ah waxay leeyihiin oo keliya 2 gobol: furan ama xiran. Kuwa kale waxay awood u siinayaan wareegga dareeraha iyo cadaadiska in la beddelo. Farsamoyaqaannada kaladuwan ayaa sidoo kale sababa qaddarro kala duwan oo luminta walaaca. Waxay kuxirantahay duruufaha, astaamo gaar ah ayaa loobaahanyahay.
Mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee filtarka waa globe valve. Maqaalkan kooban, waxaan ku sharraxeynaa sida fallaadhiyeyaasha dunidu u shaqeeyaan, oo ay ku jiraan faa'iidooyinkooda iyo hoos u dhacyadooda.
Waa maxay waalka dunidu, oo waliba sidee buu u shaqeeyaa?
Si aad u go'aansato haddii waalka dunidu ku habboon yahay dalabkaaga, tixgeli 3-da astaamood ee muhiimka ah. Ugu horreyn, fureyaasha waxqabadka dhinaca, oo tilmaamaya inay furmayaan ama xirayaan iyadoo ku saleysan dhaqdhaqaaqa kor iyo hoos ee jiridda. Marka labaad, way oggolaadaan, joojiyaan, ama wareegga dareeraha ceelasha. Farsamooyinka qaarkood waxay leeyihiin oo keliya furitaanka iyo sidoo kale xirista gobollada, laakiin fallaagadaha adduunka ayaa ceejin kara socodka iyaga oo aan gebi ahaanba joojin. Midda saddexaad, waxay abuuraan khasaaro weyn oo madax ah oo ka duwan kuwa kale ee kala duwan, oo ah isweydaarsiga adeegyada ceejinta.
Kaliya sida qalabku u shaqeeyo dunidu
Banaanka ka soo baxa, guluubyada dunidu waxay leeyihiin saddex qaybood, lugo-gooyo, dabool, iyo jidh. Dambaska waxaa ku yaal jir, iyo sidoo kale markii lugta la rogo, jirriddu waxay isku dhex yaacdaa kor iyo hoosba booska. Dhamaadka jirida jirku waxay leedahay curiye yar oo la yiraahdo disk ama plug, kaas oo noqon kara mid bir ah ama aan ahayn mid bir ah oo laga heli karo qaabab kala duwan, iyadoo ku xidhan baahida loo qabo.
Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee filtarka adduunka ayaa ah awoodda ay u leeyihiin inay ceejiyaan ama u xakameeyaan socodka. In la xiro ama la furo ka sokow, qayb ahaan way furnaan karaan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad beddesho wareegga wareegga adiga oo aan gebi ahaanba joojin.
Faa'iidada ugu weyn ee filtarka adduunka ayaa ah isbarbardhigga weyn ee luminta madaxa ee ay horumariyaan. Madaxa lumis, oo sidoo kale loo yaqaan luminta walbahaarka, waxaa loola jeedaa xaddiga waayo-aragnimada dareeraha caabbinta markay ku sii socoto dhuumo. Adkaysi badan, culeys badan ayaa luma. Cuf isjiidjiid, isqabqabsi (dareeraha iyo darbiyada tuubada), iyo waliba qalalaasaha dhamaantood waxay keenaan khasaarahan. Qaliinka iyo rakibida ayaa sababa cadaadis lumis inta badan iyada oo loo marayo qalalaasaha.
Globe valves waxay ku qasbaan dheecaanka inay beddelaan tilmaamaha markay socdaan, iyagoo soo saara khasaare iyo qalalaase. Tirada saxda ah ee luminta waxay kuxirantahay qodobo sida heerka dareeraha iyo isbedelka xoqida. Si kastaba ha noqotee, wali waa suurtagal in dib loo eego cadaadiska khasaarooyinka kala duwan ee loo adeegsado mitir loo yaqaan 'L / D Coefficient'.
Goorma la isticmaalayo filtarka adduunka
Globe valves-ku waa ku habboon yihiin markasta oo aad u baahan tahay inaad wax ka beddesho qulqulka, hase yeeshee maahan inaad ku cadaadiso qadarka luminta walaaca. Codsiyada qaarkood waxaa ka mid ah:
Nidaamyada biyaha ee qaboojiyaha
Nidaamyada saliida shidaalka
Biyaha quudinta iyo waliba hababka quudinta kiimikada
Nidaamyada saliida dhaliya ee jireya
Tuubbada tuubada ka qaad oo sidoo kale jaray codsiyada ku rusheeyaha dabka ama nidaamyada kale ee amniga dabka ee biyaha ku saleysan
Globe valves maahan xulashada ugu fiican ee codsiyada kontoroolka waalka ee nidaamyada damiya dabka, halkaasoo cadaadiska uu ku kaco qiimo sare. Halkii, filtarka balanbaalis badanaa waa la isticmaalaa.